Abantu njalo ithande ithuba uthole okukhona ngokungekho. Lokhu kuchaza ukuthi siyamthanda izipho, izaphulelo, amabhonasi ezahlukene kanye ambikele.
Enye yezindlela yokukhuluma uthando esinalo freebies ukuthenga lo okuthiwa indali zaseScandinavia. Kungenzeka ukuthi uke wezwa ngawo, uma anentshisekelo ukuthi ungakwazi ukuthenga okuthile eshibhile.
Njengoba endalini enjalo isebenza futhi ukuthi iyini, siyakuphila ukuchaza ngemuva kwalokhu. Futhi, lesi sihloko sizoxoxa omunye wemisebenzi ezithandekayo sphere yokuhweba inthanethi in Internet abakhuluma isiRashiya - endalini "Bonusmall". Impendulo kusuka kubasebenzisi asebethole ephethwe ukusebenza isevisi afakiwe.
penny indali uhlelo
Ngakho, kuqala sichaza ukusebenza kohlelo endalini. Isimiso esiyinhloko okuyinto ukuthi into ithatha umsebenzisi owenza ukubheja omkhulu kakhulu lilondolozwe lapha. Nokho, kunencazelo ukuhluka - ukuhweba izimpahla engazazi kithi ngesimo intengo, kodwa izinyathelo ifomu mikrostavok.
Ngokwesibonelo, uma e-auction bendabuko, umsebenzisi Ungasetha izimpahla 50, 75, ruble 100, kuye ngokuthi kungakanani uzimisele ukuchitha, - simiso penny indali lesi sinyathelo iqinile. Ngokwesibonelo, kuba 10 amapeni. Ngakho-ke, umuntu ngeke akwazi ukungakhathazeki kakhulu ukwandisa ukubaluleka lot, futhi ngenxa yalokho, ukuqoqa futhi sizinake ngaphezu kwabanye. Enesibopho ukuvalelisa kuze kube nesikhathi auction ngeke kuphele noma iqede zokuhweba.
Auctions nezitolo eRussia
Esikhaleni Inthanethi yasekhaya ezihlukahlukene ezitolo inthanethi. Ifomu yemisebenzi yabo ulula - wena nje kufanele oda umkhiqizo, ukukhokhela futhi uthole indlela elula kakhulu. Siphinde wasebenza eziningi indali lapho kubhejwa zenziwa, kanti lo okunguyena oholela kakhulu, iqoqa izimpahla. Nokho, indlela penny indali ungazange ngenkuthalo ukumila. Iningi la masevisi - liyinkohliso frank, ephanga imali kubasebenzisi. Auction "Bonusmall" zazo singathanda ukukutshela kulesi sihloko - omunye ambalwa ungajabulisa ngempela nezimpahla ezishibhile.
Bonusmall - ithuba ugcine on ukuthenga
Ngesikhathi endalini embuzweni, likhuluma kungenzeka ukuthenga iyiphi i-smartphone efana tablet iPhone 6 noma iPad Air 2 ruble 100-200 nje. Abahleli athembisa ukuthi nomuntu owenze ukubheja sokugcina ukubhida entweni wathi, uzokwazi uyithenga ngesikhathi intengo emangalisayo ongaphakeme.
Ukwahlulela ngokubukeka ulwazi oluqukethwe ku-"Bonusmall" izimpendulo, konke lokhu kuyiqiniso. Abantu ungathola izinto ezinhle ngempela ezishibhile kakhulu, futhi ngempela uthumele okuningi ngeposi ngesimo esikahle kakhulu. Badinga kuphela ukuqonda ukuthi uthole ithuba sithathe ucingo ngalesi intengo kunzima kakhulu. Isikhathi ngasinye kwezintathu indali kukhona umncintiswano omkhulu, njalo ngemva kwemizuzwana embalwa umuntu ofuna ukukubulala ukubheja sakho ngakho "okususa" okuningi.
Ungase ucabange, bathi, yini iphuzu kule endalini siyalahla izimpahla ezibizayo ngendibilishi na? Ingabe esitolo usebenza ngaso ukulahlekelwa? Kwenziwe into enjalo! Funda okwengeziwe.
Ngakho, usuwazi ukuthi ungakwazi sithathe imishini, ngokubheja ngemali. Ithuba ngalinye, endalini 10 kopecks. Ngakho, uma emva ubeka Pete Sacha, iPhone intengo 6 inyuka ngokushelela Rouble 0.1, isib, ruble 139,5 kuya 139,6 isiyonke. Nokho, phawula ukuthi langempela izindleko izinga ruble 10. Lokho, uPetru ubizwa empeleni esichithwa ibhidi akuyona 10 amasenti, futhi izikhathi 100 ngaphezulu - ruble 10. Futhi ukubheja at 10 kopecks. ukhona ukuze ahehe abanye abahlanganyeli ku-auction - yithi, bheka indlela ezishibhile.
Ngakho-ke, impendulo isobala: Eqinisweni, kule-iPad Air 2 onikelwa ngentengo ruble 140 (okulingana 1400 amazinga ngo-10 kopecks), abantu babefaka izikhathi 100 ngaphezulu - 1400 * 100 = 140 ayizinkulungwane ruble. Ngakho, uma le nto ngeke kuthathe ngaphezu 140, futhi ezingu-200 noma ruble 300, inani lokugcina ukuthi uzothola umphathi isisetshenziswa, luyokhula kulingana.
Amanani endalini uhlelo "Bonusmall" (izibuyekezo siliqinisekise) ulula. Zenza okukodwa. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuxhuma "sasilokhu" - uhlelo sizoqhubeka ukubeka, ngisho nalapho umsebenzisi ku-intanethi. Nalapha futhi, ezishintshayo inqubo okwandisa izindleko izimpahla udlala ezandleni umphathi isisetshenziswa, njengoba kulokhu, abantu baningi, futhi inani lokugcina inzuzo kuyoba ephakeme.
Auction ihlala nje imizuzwana 20 (futhi ngezinye izikhathi 15) kwenziwa esisodwa. Ngakho, kuvela, abasebenzisi ngokwabo ukunquma esingakanani bayobizwa belwela eziningi futhi lokho kungaba izindleko zaso zokugcina. Nokho, kufanele kuqondwe ukuthi omunye ukubheja kuwufanele ruble 10. Njengoba okuhlukile, singakhumbula amazinga ibhonasi ukuthi zinikwa at ukubhalisa, uma uthola iphutha incazelo izimpahla, futhi uma abangane bringest, ukubeka "Like" kwi ukuxhumana nomphakathi kanye nokunye. Yiqiniso, ne ibhonasi izinga ukukhokha ayidingekile. Njengoba kufakazelwa "Bonusmall" izimpendulo, ababambiqhaza abaningi indali adlala ku kubhejwa free, lokho kukunciphisa ngokuphawulekayo ukudleka ukulahlekelwa kwabo kokugcina uma kwenzeka ukulahlekelwa.
Yini okufanele ngiyenze uma ngilahlekelwa?
By the way, ngokuphathelene ukwehluleka. Yebo, ngoba omunye umkhiqizo zingenza umuntu oyedwa kuphela, kusobala ukuthi bonke abakwazi kube lucky lapha, omunye izohamba lutho. Abantu abanjalo bangaba umemeze ke ukuthi "Bonusmall" - isehlukaniso, okungadingi ukugcina izethembiso. Kodwa, kholwa kimi, akusiyo.
Abahleli wenze uhlelo ukuthi kunciphisa ukulahlekelwa abadlali uma kwenzeka ukulahlekelwa. Kuyinto ukunikeza ithuba ukuthenga izimpahla ngentengo online store, ikhumbula izimali ayeyile ukubheja. Ngiyavuma, lokhu kuyiqiniso kulabo osukusebenzele imali eningi ngokuhamba ukuhweba. Nokho, ngaleso sikhathi ungalindeli eyolanda izimpahla mahhala (njengoba kwenzeka uma win). Enkampanini ethutha amasevisi kufanele ukhokhe.
Indlela ukubhala mayelana "Bonusmall" ukubuyekezwa, lokuthumela izindleko luyehluka kuye esifundeni, okuyinto uzongishiya iphakethe. Uma lokhu kuyinto Russia, futhi intengo eziningi kuyinto ruble esingaphansi 5000, zonke kuzobiza nawe ruble 500, uma ngaphezulu - 1500. Uma umthengi emazweni CIS, yena uzokhokha ruble 1,800, futhi unguye eYurophu - ruble 2300. Njengoba ubona, munye abadlali Russian izethameli akugcini, futhi kuhle ngoba ikuvumela ukudala Umncintiswano izimpahla.
Iwebhusayithi Impendulo "Bonusmall" bonisa ukuthi ngisho ne ngokweqile amasevisi zokuthutha ukuthenga izinto endalini okuyiwona iqhaza kakade, inzuzo, futhi ngenxa ngemali enhle. Izindleko ezinye izimpahla kungaphasi ngisho kuka kwezinye izitolo inthanethi. Futhi futhi isandla njengoba abagqugquzeli isayithi, kanye wabafaka amathenda yangasese.
Nokho, echaza uhlelo yomthombo, ihlala yodwa ukuba embule izimfihlo "Bonusmall": indlela yokunqoba, lokho kuncike ukunqoba endalini, indlela eyolanda izimpahla njengoba ezishibhile.
Ngeshwa, abanye izincomo jikelele engekho: amathuba kuthi uzoba umnikazi esilandelayo iPhone 6 ruble 200, nse eyomunye abahlanganyeli. Nokho, ochwepheshe singaphoqi yokuthi ngokuhamba ukuhweba Kumele usukume. Ingabe yonke into ukubheja yakho nabaphikisi umbeki hambisa, ngisho naphezu eqolo - uma abayikhokhi off, ungahlala akubuyise ngokukuhlenga endalini ngentengo fixed. Yiqiniso, isidingo ubeka kaningi - kanjalo nje wena unethuba ukushaya lo mncintiswano futhi abe owokugcina ukuvalelisa. Nokho, ukulindela ukuthi kulula, asikho isidingo.
Endalini ngokwabo bebungeke ukusebenza uma wonke umuntu wayeyokwazi kalula ukuhlenga igajethi ezibizayo ezishibhile kakhulu.
Futhi ngakho, kuvela ukuthi ukunqoba lapha - kungcono ukutshalwa kwezimali ezinkulu zezimali futhi yemali. Futhi abantu abaningi bamane bayeke kusukela kuleso sikhundla mayelana "Bonusmall" izilinganiso isehlukaniso, izigebengu, nokunye. Kufanele sikhumbule ukuthi uma umuntu has ukuthola okuthile, ungaqiniseka - kungcono kuwe. Into esemqoka - ukuzama isandla sabo, futhi udinga bonke baphume. Nokho, khumbula ukuthi ukutshala imali okuningi kwalowo obufisa ukukhokhela idivayisi entsha, akudingekile. Akwenzekanga kulokhu - ukulinda olandelayo.